Martech Zone | Cilmi baaris, Baro, Baro Iibka & Teknolojiyada Suuqgeynta
Waa maxay Swag? Ma U qalantaa Maalgelinta Suuqgeynta?
Haddii aad muddo dheer ganacsi ku jirtay, waad garanaysaa waxa swag yahay. Weligaa ma la yaabtay halka uu ereyga ka yimid, in kastoo? Swag dhab ahaantii waxaa lagu aflagaadeeyay hanti la xado ama booli ah oo la isticmaalay 1800-meeyadii. Erayga bacdu waxa ay u badan tahay in uu ahaa isha af-lagaadada...waxa aad ku ridday dhammaan wixii aad bililiqaday bac wareeg ah oo aad la baxsatay luquntaada. Shirkadaha wax duuba waxay qaateen ereyga horraantii 2000-meeyadii markii ay bac isku dubarideen
Talaabooyinka 4-ta ah ee lagu Hirgelinayo ama lagu Nadiifinayo Xogta CRM si loo kordhiyo Waxqabadka Iibkaaga
Shirkadaha doonaya inay horumariyaan wax qabadkooda iibka waxay caadi ahaan maalgaliyaan istaraatiijiyad fulineed ee madal maaraynta xidhiidhka macaamiisha (CRM). Waxaan ka wada hadalnay sababta ay shirkaduhu u hirgeliyaan CRM, shirkaduhuna inta badan waxay qaadaan tillaabada… laakiin isbeddellada ayaa inta badan ku guuldareysta dhowr sababood dartood: Xogta - Mararka qaarkood, shirkaduhu waxay si fudud u doortaan kaydinta xogta xisaabaadkooda iyo xiriirada ay galaan goobta CRM iyo xogtu ma nadiifsana. Haddii ay hore u heleen CRM la hirgeliyey,
Boostada: Qaabka Ololaha Wacyigelinta Caqliga leh ee ay ku shaqeyso AI
Haddii shirkaddaadu ay samaynayso wacyigelin, shaki kuma jiro in emailku yahay dhexdhexaad muhiim ah si loo sameeyo. Haddi ay dhigayso wax saameeya ama daabacaadda sheeko, podcaster wareysiga, wacyigelinta iibka, ama isku dayga in ay u qorto macluumaadka la qiimeeyay ee goobta si loo helo dib u xidhidh. Habka ololaha wacyigelinta waa: Aqoonso fursadahaaga oo hel dadka saxda ah ee lala xiriiri karo. Samee garaadkaaga iyo kartidaada si aad u sameyso
Sprout Bulsheed: Kordhi ka-qaybgalka Baraha Bulshada ee Daabacaadda, Dhegaysiga, iyo Platform-ka Udoodida
Isniin, April 25, 2022 Isniin, April 25, 2022 Douglas Karr
Weligaa ma raacday shirkad weyn oo khadka tooska ah oo kaliya si aad uga niyad jabto tayada nuxurka ay wadaagayaan ama ka-qaybgal la'aanta ay la leeyihiin dhagaystayaashooda? Waa calaamad muujinaysa, tusaale ahaan, in la arko shirkad leh tobanaan kun oo shaqaale ah iyo wax yar oo la wadaago ama jecel yihiin nuxurkooda. Waxay caddayn u tahay in aanay si fudud u dhegaysanayn ama aanay runtii ugu faanayn nuxurka ay horumarinayaan. Qalabka warbaahinta bulshada